कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस र सत्तारूढ नेकपा
ओली प्रशासनले जसरी विकृत र विकराल ढंगले राजकाज चलाइरहेको छ र पुँजीपति वर्गको लाभका खातिर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आर्थिक दोहनचक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, यसले सत्तारूढ नेकपा पुँजीवादी विचार र कार्यक्रममा आधारित दक्षिणपन्थी पार्टी हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
भाद्र ३, २०७७ हरि रोका
राजनीतिक सत्ताबारे लेनिनको एउटा भनाइ छ, ‘राज्यशक्ति हासिल गरेपछि कसले, कसका लागि, के गर्छ ?’ अर्थात्, राज्यको बागडोर सम्हालेपछि सरकारले कोसँग छलफल र बहस गरेर, कुन वर्गको सामाजिक जीवनस्तर वा हैसियत उकास्न कस्ता योजना र कार्यान्वयनका लागि कस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्‍यो ?
बहुसंख्यक मानिसको जीविकोपार्जनका लागि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा (जल, जंगल, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना आदि) कसरी, कुन माध्यमबाट सामाजिकीकरण गर्‍यो र कसरी दिगो र भरपर्दो उत्पादन वृद्धिका लागि संस्थागत प्रयत्न गर्‍यो भन्ने नै सरकारको आधारभूत मापक हो ।
२००७ सालको परिवर्तनदेखि नै नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, सामाजिक र आर्थिक प्रजातन्त्र, सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय रक्षासँगै दिगो विकास तथा मुलुकभित्रै पूर्ण रोजगारी व्यवस्थापन नेपालीका व्यक्त–अव्यक्त माग हुने गरेका छन् । सो अवधियता सत्तारूढ दलहरूले अस्थिर ‘सरकार’, पुँजी र प्रविधिको अभाव, दुर्गम भूगोल जस्ता विषयलाई मुलुकको विकासको न्यारेटिभका रूपमा सुनाउँदै आए । यिनै दोषलाई मेटाउन जनताले नेकपालाई तीनै तहका सरकारमा भारी बहुमत दिलाए । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली शर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । नेकपाकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए । पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम लागू गर्न संवैधानिक तथा राजकीय संरचनाहरू बिनाझन्झट पुनर्गठन गरिए, गरिँदै छन् । सत्तारूढ भएको तीन महिनापछि संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका दुई दल नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी केन्द्र) एकआपसमा ‘मर्ज’ गरिए । अढाई वर्षदेखि नेकपाको सरकारले राज गरिरहेको छ ।
ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सार्‍यो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मुलुकमा कोही भोको रहन नदिने अठोट, पहिलो कार्यकालमै ५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय र २१०० साल सुरु हुँदा नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूले हासिल गरेको औसत १२ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भेट्टाउने योजना अगाडि सार्‍यो । पहिलो कार्यकालमै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल सञ्जाल, भारत र चीनसँग राजधानी जोड्ने उच्च गतिको चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागर हुँदै नेपालका ठूला नदीहरूमा पानीजहाज, घर–घरमा बिजुली, भान्सामा ग्यासपाइप जडानजस्ता योजनाबारे भट्याउँदै आयो । संविधानअनुरूप कार्यकारी अधिकारसहितको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै ओलीले विभागीय मन्त्रीहरूको अधिकार पनि आफूमातहत ल्याए । बहालवाला मन्त्रीहरू सहकर्मीभन्दा पनि कारिन्दामा रूपान्तरित भए । लामो समयदेखि बताइँदै आएको राज्यको पुनःसंरचनाको मूल मुद्दालाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा सरकारको कुनै रुचि देखिएन ।
‘चुच्चे रेलदेखि भान्सामा ग्यासपाइप’ सम्मका मुखाग्र योजना कोरा नारामा सीमित हुनु अस्वाभाविक थिएन । संस्थागत सुधार नगरी पेस गरिएका योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमा कार्यान्वयन हुने अवस्थै थिएन । विगतमा झैं अगाडि सारिएका विकासे योजनाहरू ‘इस्टिमेटेड कस्ट’ अनुरूप समापन हुने सम्भावनै थिएन । भ्रष्टाचारका पुराना नजिरहरूलाई टेकेर ‘शून्य सहनशीलता’ नारासहित ओली सरकार सय दिन व्यतीत नहुँदै बजेटमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्यो ।
लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्या र बेथितिविरुद्ध नै युद्ध र आन्दोलन भएका थिए । मुलुकमा संघीय लोक–गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गरिएको थियो । तर सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र संस्थागत कुनै रुचि देखाएनन्, सायद यो प्रणाली स्थापनार्थ भएको आन्दोलनको उनी सख्त विरोधी भएकाले । राज्यले निजी र सहकारीलाई साथ लिएर रोजगारी बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण सम्भव छ भन्ने नै ठानेन । वर्तमान र भावी पिँढीसँग जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाले उत्पादन र रोजगारी मात्र होइन, राष्ट्रलाई साँच्चिकै स्वाधीन बनाउँछ भनी ओली सरकारले महसुस नै गरेन । सार्वजनिक सेवा र वस्तु उत्पादनमा राज्यको दायित्व मूल पक्ष हो, त्यही नै समाजवाद–उन्मुखताको पहिलो पहिचान हो भन्ने ठानेन । मार्सी भात–चिन्तनसँगै सार्वजनिक वस्तु र सेवा नाफा आर्जन गर्ने व्यापारिक कमोडिटीका रूपमा कमिसन आर्जनको खेल बनाइयो ।
धर्मनिरपेक्षता, लैंगिकता, भाषिक तथा सांस्कृतिक असमानता र विभेद हटाउने कुरालाई अटोमेटिक डाइल्युट गरियो । जनजीविका, पुँजी निर्माण, संस्थागत लगानी र रोजगारी निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समयसापेक्ष भूमिका र परिभाषा ओझेलमा पारियो । जल, जंगल र जमिनलाई आम मानिसको जीवनवृत्तिभन्दा बजारु वस्तु (कमोडिफिकेसन) गर्न रुचाइयो, जस्तो— भूमि बैंक योजना । भूमिसुधार, प्रगतिशील कर, पब्लिक गुड्स उत्पादनमा समन्वय खोजिएन । स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली श्रमशक्तिको समृद्धि र रक्षामा जिम्मेवारी निर्वाह गरिएन । संरचनात्मक र संस्थागत परिवर्तनको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै छ । यद्यपि सरकार, बिचौलिया तथा नोकरशाही तीन थरीको मिलेमतोमा देशको ढुकुटी–लुट जारी छ । छोटो समयमै प्रणालीगत संकट संघारमा आइपुगेको छ । असफल हुँदै गएको नेकपा सरकार कहाँ चुक्यो, कसरी बाँच्ने भनेर व्यक्ति, विधि र पद्धतिमा खोजी जारी छ । यो आलेखचाहिँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस (परिकल्पना) र नेकपाको तार जोडिनै नसक्ने गरी कहाँ टुट्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
साम्यवाद के हो ?
साम्यवाद के हो भन्नेबारे सयौं भाषामा हजारौं पुस्तक होलान् । सारमा साम्यवाद त्यस्तो विश्वास हो, जसले पुँजीवादी अमानवीयताबाट पीडित विशाल जनमतको पक्षमा मानवतावादको रक्षा गर्छ । सम्पत्तिको लोभ, त्यसका लागि जसरी पनि नाफा तथा कुत (रेन्ट) आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र निजी स्वार्थहरूको लडाइँबाट उत्पादित असमानताको माखेसाङ्लोबाट बहुसंख्यक शोषित–पीडित मानिसलाई मुक्ति दिलाउँछ । खास गरी साम्यवाद उदारवादी तथा नवउदारवादी शोषण र उत्पीडनबाट मानव मुक्त गर्ने प्रणाली हो ।
दोस्रो, राज्य सबै खाले हिंसाको माउ हो । हिंसाको एकाधिकार राज्यसँग रहन्छ । उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि निश्चित वर्गको अक्षुण्ण अधिकार स्थापित गर्न पुँजीवादी मुलुकमा यही एकाधिकार प्रयोग गरेर तिनलाई कब्जामा लिइन्छ । संगठित शोषणसहितको वर्गीय असमानता राज्यले खडा गर्ने हो । ‘राज्य ध्वंस हुनुपर्छ’ र सबैका लागि समान अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने साम्यवादको मूलभूत मान्यता हो । तेस्रो, साम्यवाद आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्पादनका लागि एकअर्कालाई शोषण र उत्पीडन नहुने गरी श्रम विभाजनको (अर्थात्, शारीरिक तथा बौद्धिक श्रमिकबीच कार्यसम्पादन गर्ने र व्यवस्थापन गर्न) मेलो मिलाउने व्यवस्था हो ।
यी तीन साम्यवादी उद्देश्यलाई मर्ज गर्दा उदारवादी/नवउदारवादी प्रणालीको नयाँ विकल्प बन्छ । साम्यवाद एकताबद्ध समाज निर्माणका लागि गरिने विज्ञानसम्मत सम्भावनाको खोजी हो । यो ऐतिहासिक खोजीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि तीन आयामलाई बुझ्न जरुरी छ । पहिलो, उत्पादन पद्धतिमा रहेको कमजोरीलाई (साधनमाथि पहुँच, स्वामित्व र सम्बन्ध) हटाउन । दोस्रो, राज्यको वर्तमान उदारवादी/नवउदारवादी अवधारणा बोकेको राज्यको विकल्प खोज्न । तेस्रो, विभिन्न वर्ग तह र तप्कामा बाँडिएका श्रमिकहरू संगठित रूपमा क्रियाशील बनाउन । फ्रान्सेली दार्शनिक अलान बैदेयु ‘द कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस’ मा लेख्छन्— साम्यवादले हालसम्म तीनवटा अवस्था पार गरेको छ । पहिलो, मार्क्स, एंगेल्स लगायतका केहीले उन्नाइसौं शताब्दीमा विचार (आइडिया) निर्माण गरेर । दोस्रो, बीसौं शताब्दीको सुरुआतमा कमजोर परिवेशमा लेनिनले राज्य–नियन्त्रित साम्यवादको अभ्यास सुरु गरेर । र तेस्रो, एक्काइसौं शताब्दी सुरु भएयता विश्व नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने तरखरमा छ । यो बेला साम्यवाद स्थापना वा पुनःस्थापनाको परियोजना पनि आधुनिक संसारको आधारभूत चरित्रमा देखा पर्ने परिवर्तनसँगै विकसित हुँदै जानेछ भन्ने मान्यतामा छ । सत्तारूढ नेकपा यी साम्यवादी परिकल्पनाभन्दा ठीक विपरीत बाटो हिँडिरहेको छ ।
पार्टी संगठन विधि र प्रक्रिया
मार्क्सले कम्युनिस्ट हुनुका लागि चारवटा मूलभूत चरित्र अंगीकार गर्न जरुरी ठानेका थिए । एक, कम्युनिस्ट उदारवादीहरूले अर्थ्याएझैं असामाजिक प्राणी होइनन् र कम्युनिस्टलाई ऐतिहासिक र राजनीतिक अंशबाट सधैं बाहिर राख्न सम्भव छैन । विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीमा सेकिएर, अनेक षड्यन्त्र र जालझेल भोगेर उनीहरूले विगतबाट पाठ सिक्दै भविष्य निर्माण गर्नेछन् । मार्क्सको यो प्रक्षेपणलाई माओ त्सेतुङले ‘मास–लाइन’ मा व्याख्या गरेका छन् । दोस्रो, कम्युनिस्ट आइडियालाई सञ्चार गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ जुन क्रान्तिको लक्ष्य निर्धारणमा सहयोगी हुन्छ ।
तेस्रो, कम्युनिस्ट चरित्रबारे मार्क्सको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रियवादी हुनुपर्छ । र चार, कम्युनिस्टले साझा विश्वव्यापी रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । यी विशेषतालाई मूर्तरूप दिन सशक्त संगठन आवश्यक हुन्छ । ‘राज्य र क्रान्ति’ मा लेनिन लेख्छन्, ‘पार्टीले श्रमिकलाई शिक्षित तुल्याउँछ । पार्टी संगठनले श्रमिक–सर्वहारा वर्गका अगुवालाई मार्क्सवादी सिद्धान्तको व्याख्याअनुरूप राज्यशक्तिको चरित्र र त्यसलाई बदल्ने विषयमा प्रशिक्षित गर्छ र समाजवादी रणनीतिमा क्रियाशील हुन सिकाउँछ । अझ भनौं, उपलब्ध राज्य प्रणालीमा कसरी संगठित रूपमा काम गर्ने भनी सिकाउँछ, ताकि सम्पूर्ण शोषित–पीडित जनताको सामाजिक जीवनपद्धति तथा स्तरलाई उठाउन र बुर्जुवाहरूको शोषणविरुद्ध र बुर्जुवाबेगरको समाज निर्माण गर्न सकियोस् । ‘जनवादी केन्द्रीयता’ कम्युनिस्ट, मजदुर र समाजवादी पार्टीहरूको सांगठनिक सिद्धान्त हो । यसका चारवटा मूलभूत विशेषता छन्— सबै नेतृत्वदायी अंगहरू निर्वाचित हुनेछन्, मातहत संगठनले माथिल्लो कमिटीमा आवधिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयनमा अल्पमत पक्ष बहुमतको सहयोगी बन्नुपर्छ, पार्टीको माथिल्लो निकायले गरेको निर्णयलाई तल्लो कमिटीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आधिकारिक निर्णय लिनुभन्दा पहिला पार्टीका आमकार्यकर्तालाई सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम र सांगठनिक पद्धति निर्माणमा बृहत् बहस गर्न, आफ्नो मत जाहेर गर्न र भिन्न मत राख्न दिनुपर्छ ।
औपचारिक निर्णयपछि बहुमतले गरेको निर्णय पार्टीका सबै सदस्यले पालन गर्नुपर्छ । समापन भएको महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशन नहुन्जेल केन्द्रीय कमिटी सर्वेसर्वा हुनेछ । केन्द्रीय समितिले छिटोछरितो कामका लागि पोलिटब्युरो, स्ट्यान्डिङ कमिटी तथा एक महासचिव छान्छ । छिटो–छरितो निर्णय गर्न चुस्त–दुरुस्त कमिटी गठन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, १ अर्ब ३९ करोड जनसंख्या रहेको चीनको हाल ९ करोड २० लाख सदस्य भएको सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनका लागि २ हजार प्रतिनिधिको स्थानीय कमिटीबाट छानेर आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ । ती प्रतिनिधिले २०५ केन्द्रीय सदस्य, १७१ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूको कमिटी गठन गर्छ । सो कमिटीले २०–२५ जना ननघाईकन पोलिटब्युरो र सो पोलिटब्युरोले ७ देखि ९ जनाको स्ट्यान्डिङ कमिटी चुन्छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले आफूमध्येबाट १ जनालाई पार्टी महासचिव छान्छन् । सामूहिक नेतृत्व पार्टी सञ्चालनको मात्र होइन, राष्ट्र सञ्चालनको मूल आधार मानिन्छ (हिस्टोरिकल डिक्सनरी अफ द चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी, दिस्क्यारक्रो प्रेस, सन् २०१२) । नेकपाको माउ होस् या जनवर्गीय माथि उल्लिखित सांगठनिक सिद्धान्तमा संगठित छैनन् । भद्दा कमिटी यसकारण बनाइन्छ, ताकि सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा १–२ जनामा निर्णय एकाधिकार वा वर्चस्व रहोस् । हाल प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो अध्यक्षको हैसियतमा गरिरहेको अभ्यास ‘मोनोपोली’ को मूर्तरूप हो, जहाँ सामूहिक नेतृत्वको गुन्जायस रहन्न ।
वर्तमान सन्दर्भमा साम्यवादको औचित्य
‘साम्यवाद’ आदर्श प्रदर्शनको साधन होइन । भूमण्डलीकृत पुँजीवादले उपलब्ध स्रोत–साधन धनाढ्य वर्गको पोल्टामा पार्दै लगेपछि इतिहासमा प्रकृति र मानवीयताको धज्जी उडेको छ । क्रूरतम अमानवीय पुँजीवादले खडा गरेको विराट् असमानता र शोषणविरुद्ध लड्न फेरि पनि साम्यवादी विचारयुक्त श्रमजीवी सर्वहाराको अग्रगामी संगठित शक्तिको अपरिहार्यता संसारभर देखिँदै आएको छ, तर विघटित सोभियत संघले समाजवादका नाममा अख्तियार गरेको नोकरशाहीतन्त्र भित्र्याउने अर्थमा होइन ।
वर्तमान असमानताविरुद्धको लडाइँ किन पनि आवश्यक छ भने यसबाट आर्थिक मात्र होइन, सांस्कृतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन (सहशिक्षा र सामुदायिक स्वास्थ्यमा देखिएको असमानता) र राजनीतिको खाडल पुर्न नसक्ने गरी गहिरो हुँदै छ । व्यक्ति, समुदाय, गाउँ र सहरको आन्तरिक सञ्जालभित्र मात्र होइन, धनी र गरिब मुलुकबीच आर्थिक तथा सामाजिक विभेद विस्तार भइरहेछ । यस्तो विभेदलाई काखी च्याप्नाले राजनीतिक सम्भ्रान्तमाथि आममानिसको विश्वास टुट्दै गएको छ । नवउदारवाद तथा उदारवादले विस्तार गरेको सामाजिक असन्तुष्टिका कारण अति दक्षिणपन्थीहरूप्रति समर्थनको उभार बढ्दो छ । नवउदारवादलार्ई ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल’ मानेर अघि बढ्दा एउटा सानो स्वार्थ–समूहले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने (ओलीगार्की) प्रणाली भत्काएर विद्यमान अर्थराजनीतिको संरचना परिवर्तन नगरेसम्म विद्यमान शोषण र असमानताबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन । मुलुकभित्र भएको पुँजी र सम्पदा आर्जन गर्ने उत्पादनका साधनमाथि, सबै खाले असमानता तथा अवसरबाट वञ्चित रहेको आम जनसमुदायको अधिकार स्थापित गर्न तिनको वितरण र पुनर्वितरण नगरेसम्म बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर माथि उक्सँदैन । त्यसका निम्ति सामाजिक र सामुदायिक हितरक्षाका लागि कानुन र संस्थाहरू निर्माण गर्न, सामाजिक न्याययुक्त समाज खडा गर्न लालायित स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व भएको राजनीतिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।
चार दशकको अभ्यासमा सत्ताधारीहरूले नवउदारवादको विकल्प छैन, पुँजीवादी विकास सम्पन्न नगरी सम्पत्तिको वितरण तथा पुनर्वितरण गर्नु भनेको गरिबीको वितरण हो भन्नेजस्ता कुतर्क गर्दै आए । यो हाल सत्तारूढ दलको मूलधार भनिने नेतृत्वबाट अर्कातर्फ, सोभियत युनियन र पूर्वी युरोपको समाजवाद विघटनको धक्का खाएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको आत्मबल खस्किरहेका बेला पेस गरिएको प्रतिरक्षात्मक डकुमेन्टलाई सदाबहार सिद्धान्तका माध्यमले उदारवादी प्रजातन्त्रको जलप हालेर बहुदलीय जनवादका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भयो । दुर्घटनावश मृत्युवरण गरेका महासचिवको राजनीतिक लोकप्रियतालाई भजाएर प्रतिरक्षात्मक दस्तावेजलाई भावनात्मकताको गुलियो चास्नीमा डुबाएर सिद्धान्त बनाइयो, सम्पूर्ण बहस र रचनात्मक छलफललाई अवरुद्ध गरियो । परिणामतः आज देखिँदै छ, शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष स्वयं सबै खाले बैठकबाट भागिरहेका छन् ।
संरचनागत तथा संस्थागत परिवर्तन नगरी पुरानै प्रयोगलाई दोहोर्‍याएर न मुक्ति प्राप्त हुन्छ, न त अपेक्षित विकास । पछिल्ला चार दशक नवउदारवादीहरूको दशक रह्यो, यही अर्थराजनीतिको बुई चढेर ३५ वर्षदेखि पुँजीवादी भूमण्डलीकरणलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्‍यो । यो अर्थराजनीतिक प्रणालीमा आम रूपमा गरिबी र सबै खाले असमानताबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाएनन् । असमानताबाट उत्पन्न भएको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न ल्याएको समावेशी सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व बंग्याएर ‘क्रोनिज’ हरूमा स्थापित गराइयो । निर्वाचन प्रणाली नबदल्दा समाजको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको छर्लंगै देखिएको छ ।
अमेरिकी राजनीतिशास्त्री गणेश सीतारमन लेख्छन्— संसदीय प्रजातन्त्रमा शक्ति परिवर्तनमा आधारित हुन्छ । यसको अर्थ हो— शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण । तर यस्तो सत्ता हस्तान्तरणले आधारभूत रूपमा ‘समाज’ र ‘विकास’ का मोडलमा केही फरक पर्दैन । नेपालको हकमा हिजोको कांग्रेसी शासनले विस्तार गरेको नवउदारवादी अवधारणालाई आफ्नो कार्यक्रममा समेटेर ओली प्रशासन जसरी विकृत र विकराल ढंगले राजकाजको बिँडो थाम्दै घिस्रिरहेको छ र पुँजीपति वर्गको लाभका खातिर सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र दोहन गर्ने आर्थिक दोहनचक्र दोहोर्‍याइरहेको छ, यसले समष्टिमा सत्तारूढ नेकपा नवउदारवादमा आधारित विकृत पुँजीवादी विचार र कार्यक्रम बोकेको दक्षिणपन्थी पार्टी हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस खोज्नु केवल मृगतृष्णा हो । साम्यवादी हाइपोथेसिस अनुरूप साम्यवादी पार्टीको आवश्यकता छ भन्ठान्नेहरूले नयाँ खेती प्रारम्भ गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:२५